Harry Maguire Oo Naftiisa Eedaymo U Jeediyey Kaddib Barbarrihii Manchester United Ay La Gashay AC Milan - GOOL24.NET
Kabtanka Manchester United ee Harry Maguire ayaa eedaymo u jeediyey naftiisa kaddib markii uu khasaarihiyey fursad dahabi ahayd kulankii ay United barbarraha la gashay AC Milan oo kusoo booqatay Old Trafford.
Labada kooxood ee magaca weyn ayaa 1-1 ku kala baxay lugta hore ee wareegga 16ka tartanka Europa League, waxaana gool uu bilowga qaybta hore dhaliyey Amad Diallo ka daba yimid Simo Kjaer oo daqiiqaddii ugu dambaysay ciyaarta u dhaliyey goolka barbarraha kooxdiisa AC Milan.
Kooxda martida ahayd ayaa u qalmaysay in ugu yaraan ay barbarro ka hesho Old Trafford, sababtoo ah waxay inta badan maamulayeen ciyaarta gaar ahaan qaybtii dambe iyadoo laga diiday laba gool oo degdeg ahaa oo qaybta hore ay dhaliyeen.
Harry Maguire ayaa kubbad uu kali ku ahaa waxa uu ka khasaariyey kooxdiisa iyadoo uu birta ka jaray qaybta hore, halka Daniel James uu isaguna beer-darreeyey fursad kale oo gool loo qaatay qaybta dambe.
Kaddib markii ay ciyaartu soo dhamaatay, Harry Maguire oo warbaahinta la hadlay ayaa isagu is dhaliilay, waxaanu yidhi: “Ma garanayo sida ay kubaddaasi u geli weyday goolka, waxaan u qaatay inaan dhaliyey, ma jiro wax aan ku cudur-daaran karayo (fursadda uu khasaariyey).”
Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaas raaciyey: “Waxa aan helay fursad weyn, Daniel James ayaa isaguna fursad kale oo weyn helay qaybta labaad, xoogaa ciyaarta way naga sarreeyeen laakiin may helin fursadahayaga oo kale.”
Harry Maguire waxa uu amaan u jeediyey xiddiga da’da yar ee goolka u dhaliyey United ee Amad Diallo, waxaanu sheegay in arrinta kaliya ee togan ee kooxdooda ka muuqatay uu ahaa da’yarkan iyo goolka uu dhaliyey.